Saraakiisha ciidamada dowlada ayaa sheegay inay dileen Sarkaal ka tirsanaa Al-shabaab, Qaar kale oo noolna ay gacanta ku dhigeen.
Taliyaha ciidamada dowlada Qaybta 12-ka Apriil Jen. Max’uud Maxamed Qaafow ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ku dileen Sarkaalkan dagaal ka dhacay inta u dhaxeysa Buulo burde iyo Jalalaqsi.
Jen. Qaafow ayaa intaa ku daray in ciidamada Al-shabaab ay soo qaadeen illaa 3 weerar kuwa dowladana ay iska caabiyeen ayna dagaaladaasi ku dileen ilaa todoba nin oo Al-shabaab ka tirsanaa kuwasoo uu ku jiro Sarkaal lagu magacaabi jiray Shiikh Cali Yare
“Waxaan nolol ku qabanay labo nin oo Shabaab ka tirsan, dhawaan ayaana warbaahinta u soo bandhigi doonaan” ayuu yiri Jen. Qaafow oo xusay in ciidamada dowlada ay dagaalkaas kaga dhaawacmeem sadex askari.
Taliyaha ayaa ku goodiyay in xoogaga Alshabaab ay ka nadiifin doonaan inta u dhaxeysa Jalalaqsi iyo Buulo burde, isagoo xusay iney maanta gaari doonaan degmada Buulo Burde si ay gaarsiiyaan 19 gaadiid xamuul ah oo sahay gargaarb sida.
Madaxweynaha Somalia Xasan Shiikh ayaa amar ku bixiyey in degmada Buulo Burde xoog lagu gaarsiiyo gaadiid sida raashiin gargaar ah oo muddo labo bilood ka badan ku xanibnaa degmada Jalalqsi.